ဈေးကွက်ဗျူဟာ … မေးမယ်ဗျာ (၁) | မာသင်
ဈေးကွက်ဗျူဟာ … မေးမယ်ဗျာ (၁)
Alpine သောက်ရေသန့် ကို လွယ်ဟိန်းကုမ္မဏီက ထုတ်တယ်။
Life သောက်ရေသန့်ကို လဲ လွယ်ဟိန်းကုမ္မဏီ ကပဲ ထုတ်တယ်။
alpine တစ်ဗူးရောင်းဈေးက ၂၀၀ ကျပ်
Life တစ်ဗူးရောင်းဈေးက ၁၅၀ ကျပ်
၁။ ဘာဖြစ်လို့ ကိုယ့်ကုန်ပစ္စည်းအချင်းချင်းကို မတူညီ တဲ့ဈေးနုန်းနဲ့ ပြိုင်ဆိုင်စေတာလဲ ?
၂။ ကိုယ့်ကုန်ပစ္စည်းအချင်းချင်း ဈေးကွက် ပြိုင်ဆိုင်မှု ရဲ့ ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးတွေက ဘာတွေလဲ ?
၃။ ဆင်တူကုန်ပစ္စည်းတစ်မျိုးတည်းကိုပဲ ဈေးလျော့ပြီးထုတ်လုပ်တဲ့ အခြားကုမ္မဏီ တစ်ခု ဥပမာ ကိုဖော်ပြပါ?
အားလုံးအတွက် အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။